Fifidianana loholona : miaiky ny fahadisoana ny Ceni | NewsMada
“Maro ireo fahadisoana, fa mety misy ny tsy mbola zatra tamin’ireo mpikamban’ny biraom-pifidianana na noho ny fikoropahana”, hoy ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, teny Alarobia, omaly, momba ny fifidianana loholona. Misy tamin’ireo faritra sasany izay nahitana zavatra mila fanarenana sy fanitsiana.
Anisan’izany, ohatra, ny nahitana biletà tokana misy famantarana manokana tsy araka ny lalàna. Misy koa ny fitanana an-tsoratra (PV) izay tena hita, voamarina sy voaporofo, fa novaina an-tsitrapo: misy ny kosokosoka. Nanao fanamarinana ny Ceni fa tena novaina tokoa izany PV izany.
Ao indray ny antontan-taratasim-pifidianana tsy feno araka ny tokony ho izy: tsy nahitana lisitry ny mpifidy, ohatra, na taratasy fanisam-bato, na fitanana an-tsoratra araka ny tokony ho izy…
Tsy maintsy jeren’ny Ceni tsara ireny rehetra ireny, ary arenina raha ao anatin’ny fahefan’ny Ceni ny hanao an’izay. Na izany aza, nambarany fa tsy manana fahefana hanafoana isam-bato ny Ceni. Ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) no manana fahefana amin’izany fanafoanana isam-bato izany.
Amin’ny 11 janoary ny famindram-pahefan’ny Cenit sy ny Ceni
Tao anatin’izay roa volana mahery kely izay, niara-niasa teny amin’ny foibe, Alarobia, ny Cenit sy ny Ceni. Voalazan’ny lalàna fa tsy afa-kitsahatra amin’ny asany ny Cenit, raha tsy misy ny didim-panjakana avoakan’ny filohan’ny Repoblika eo anivon’ny filankevitry ny minisitra. Nivoaka tamin’ny 30 desambra 2015 izany, mampitsahatra ny Cenit amin’ny asany. Rehefa nifandamina ny roa tonta, hotanterahina amin’ny 11 janoary ho avy izao ny famindram-pahefana eo amin’ny Cenit sy ny Ceni.